Izizathu Eziphezulu Ezi-10 Zokwakha Iwebhusayithi Yakho Nge-WordPress | Martech Zone
Izizathu Eziphezulu Ezi-10 Zokwakha Iwebhusayithi Yakho Nge-WordPress
Lwesine, Disemba 6, 2018 URitesh Patil
Ngebhizinisi elisha, nonke nikulungele ukungena emakethe kodwa kukhona into eyodwa engekho, iwebhusayithi. Ibhizinisi lingaqhakambisa uphawu lwalo futhi libonise ngokushesha amanani alo kumakhasimende ngosizo lwewebhusayithi ekhangayo.
Ukuba newebhusayithi enhle, ekhangayo kuyinto edingekayo kulezi zinsuku. Kepha yiziphi izinketho zokwakha iwebhusayithi? Uma ungusomabhizinisi noma ufuna ukwakha uhlelo lwakho lokusebenza okokuqala ngaleso sikhathi WordPress kuyinto engafeza izidingo zakho ngendlela engabizi.
Ake sihlole izizathu ezilandelayo eziyi-10 zokuthi kungani i-WordPress ibalulekile ebhizinisini lakho ukuze iphile kule makethe eshintsha njalo.
Yakha Iwebhusayithi Yakho ngeWordPress ngendlela engabizi kakhulu - I-WordPress imahhala ngokuphelele. Yebo! iqiniso. Akunandaba ukuthi ufuna iwebhusayithi yezentengiso noma ufuna indawo yangasese yebhulogi, iqiniso ukuthi i-WordPress ayithathi izindleko ezengeziwe noma ezifihliwe. Ngakolunye uhlangothi, i-WordPress inqubo yomthombo ovulekile ekuvumela ukuthi uthuthukise noma uguqule ikhodi yayo yomthombo okusho ukuthi ungenza kalula ukubukeka kwewebhusayithi yakho noma ukusebenza kwayo.
Isikhombimsebenzisi Esisebenziseka Kancane - I-WordPress idalwe ngendlela elula esiza bonke abantu bezobuchwepheshe nabangewona ubuchwepheshe. Isizathu esiyinhloko ngemuva kwesidingo esikhulu se-WordPress emhlabeni wonke. Ngakolunye uhlangothi, i-WordPress kulula ukuyisebenzisa futhi ibuye ivumele abasebenzisi ukuthi bazenzele amakhasi wabo wewebhu, okuthunyelwe, amamenyu ngesikhathi esinqunyelwe. Ungasho ukuthi kwenza abantu umsebenzi ube lula.
Kulula Ukulanda Izindikimba Zamahhala nama-plugins - Sivele sishilo ukuthi ngokuxhaswa yi-WordPress ungakha iwebhusayithi yakho ngendlela engabizi. Ngaphezu kwalokho, uma ungenayo i-premium ye-WordPress, ungakhathazeki, nazi amakhulu ezindikimba zamahhala nama-plugins akhona ongawalanda kalula kuwebhusayithi yakho. Uma uthola ingqikithi efanelekile mahhala lapho kungonga amakhulu akho amadola.
I-WordPress ingakwazi ukukala kalula - Ukwakha iwebhusayithi esebenzayo kufanele uthenge isizinda nokusingathwa. Izindleko zokubamba ngu- $ 5 ngenyanga lapho igama lesizinda libiza cishe u- $ 10 ngonyaka. Ngokuyinhloko, i-WordPress ingakwazi ukukala izidingo zebhizinisi lakho ngakho-ke ayikhokhisi uma ufinyelela ithrafikhi eyanele noma ufuna ukwandisa iwebhusayithi yakho. Kubukeka njengokuthengwa kwegeyimu yevidiyo. Uma unayo, akekho ongakuvimba ukuthi uyisebenzise.
Ilungele Ukusetshenziswa - Ngemuva kokufaka i-WordPress ungaqala ngokushesha umsebenzi wakho. Akudingi ukulungiswa, ngaphandle kwalokhu ungenza ngezifiso itimu yakho, futhi ungasebenzisa i-plug-in efanelekayo. Isikhathi esiningi usesha ukufakwa okulula okungaxhumanisa ukuphakelwa kwemithombo yezokuxhumana, ukuphawula, njll.
I-WordPress Ithuthukisa Njalo - Ukuvuselelwa okujwayelekile akukona okwenzelwe ukuphepha kuphela; bahlala benikeza izici ezithuthukile ezenza ipulatifomu ibe ngcono kubo bonke abasebenzisi. Ngaphezu kwalokho, ithimba lochwepheshe lonjiniyela 'livuselela i-plug-in entsha nehlukile ukujabulisa umsebenzisi. Njalo ngonyaka bethule izici zenkambiso futhi bavumela abasebenzisi ukuthi bayihlole.
Izinhlobo zemidiya eziningi - Wonke umuntu ufuna ukwenza okuqukethwe kwewebhusayithi yakhe kucebe futhi kuhlanganyele. Futhi ufisa ukufaka imininingwane eminingi ekhasini "ngathi". Iwebhusayithi iba muhle ngokwengeziwe uma ifaka ividiyo ethakazelisayo noma igalari yezithombe. Yebo! I-WordPress ikunikeza inketho yokufaka lezo ngaphandle komthungo ngendlela ehlaba umxhwele. Kufanele uhudule bese uphonsa isithombe noma ungakopisha unamathisele isixhumanisi sevidiyo yakho ongayikhetha futhi sizovela esikhathini esinqunyelwe. Ngaphezu kwalokho ungafaka izinhlobo ezahlukahlukene zamafayela, njenge .mov, .mpg, mp3, .mp4, .m4a.3gp, .ogv, .avi, .wav, .mov, .mpg phakathi kwabanye. Kukunika inkululeko yokulayisha okufunayo okungenamkhawulo.
Shicilela okuqukethwe esikhathini esifushane - Uma ufuna ukushicilela okuthunyelwe kwakho ngendlela esheshayo i-WordPress kufanele ibe yisixazululo sakho esisodwa. Ngokuchofoza okumbalwa kwegundane lakho, ungashicilela okuqukethwe kwakho ngomlingo. Ngaphezu kwalokho, uma unohlelo lokusebenza lwe-WordPress kuselula yakho ungashicilela okuthunyelwe kwakho kusuka noma yikuphi, nganoma yisiphi isikhathi.
Unokudideka ku-HTML Code? - I-HTML akuyona inkomishi yetiye yawo wonke umuntu. Kepha i-WordPress ikunikeza ipulatifomu lapho ungalayisha khona okuthunyelwe kwakho ngaphandle kokuxhaswa yi-HTML. Lokho kusho ukuthi ungadala amakhasi futhi ugcine okuthunyelwe kwakho okuvamile ngaphandle kokwazi i-HTML.
Kuphephile Futhi Kuthembekile Futhi - Ngokungangabazeki, i-WordPress iyi-platform enamandla yokuthuthukiswa kwewebhu ephatha nezinkinga zakho zokuphepha. I-WordPress igqamisa ukuvuselelwa okuvamile kanye nezimagqabhagqabha zokuphepha zewebhusayithi ezikugcinela indawo ephephile. Ngezinyathelo ezithile eziyisisekelo, ungaphatha kalula iwebhusayithi yakho ye-WordPress ekugencweni.
Njengokwazi kwakho, WordPress Iwebhusayithi yomuntu siqu noma yezentengiso. Ixazulula ngobuhlakani inqubo yakho yokuphathwa kokuqukethwe futhi ikuvumele inkululeko yokushicilela ngaphandle komngcele. Uma ufuna ukwakha iwebhusayithi yakho futhi ungenayo imali eyanele yokuyakha i-WordPress izoba yisixazululo sakho sokuma esisodwa. Ungazakhela iwebhusayithi yakho ngendlela engabizi. Ngiyethemba ukuthi le ndatshana ikunikeza umbono ngezinzuzo nokubaluleka kweWordPress kule ndawo eshintsha njalo emakethe.
Tags: Ukukhangisa Okuqukethweumhlelihtmlizinhlobo zemultimediaama-pluginukulungele ukusebenzisaethembekileisikalikulondekethemesisikhombimsebenzisi esisebenzayoWordPress
URitesh Patil ungomunye wabasunguli be- IMobisoft Infotech lokho kusiza ama-startups namabhizinisi kubuchwepheshe beselula. Uthanda ubuchwepheshe, ikakhulukazi ubuchwepheshe beselula. Ungumblogger okhuthele futhi ubhala kuhlelo lokusebenza lweselula. Usebenza enkampanini ehamba phambili yokuthuthuka ye-android enonjiniyela bohlelo lokusebenza abanekhono le-android elisungule izinhlelo ezintsha zamaselula emikhakheni ehlukahlukene enjengezezimali, umshuwalense, ezempilo, ezokuzijabulisa, ukukhiqiza, izimbangela zomphakathi, ezemfundo nokunye okuningi futhi uhlabane ngemiklomelo eminingi ngokufanayo.
Iseluleko Esihamba phambili Samasu Wokumaketha Okuphumelelayo Kweminyaka Eyinkulungwane